» शिक्षामा नैतिकताको खाँचो
शनिबार, १५ फाल्गुण २०७७
शिक्षामा नैतिकताको खाँचो
१० फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:४९
नेल्सन मन्डेलाले भनेका थिए, सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार शिक्षा हो, जसलाई चलाई तिमी संसार बदल्न सक्छौँ । कामै नगरीकन खाने शैक्षिक प्रमाणपत्र सिरानीमा च्यापेर हल्लिएर बस साँच्चै हँसियाहथौडा बोकेर चोरी डकैती गर राजनीति अधिकारका नाममा सधैँ देशमा अस्थिरता मच्चाउने गर, त्यो परिवर्तनले संसार बदल्न सक्दैनौँ । व्याचलर, मास्टर सिध्याएर बसेको एउटा शिक्षित युवालाई सोध्ने हो भने आजकाल के गर्दै छौ ? ऊ निश्चित रूपमा बेरोजगार छु भन्छ । सरकारी जागिर खान पहुँच छैन । माथिसम्म भनसुन पहुँच नभए पढेर कामै छैन । लिखितमा चौध पटक नाम निकालेको व्यक्ति अन्तिममा मौखिकमा फालिन्छ, ऊ निराश हुन्छ । अन्तिममा बाध्य भएर खाडीतिर भौँतारिन्छ । योभन्दा संसार बदल्ने हतियार अरू के हुनसक्छ ? महामहिम नेल्सन मन्डेला महोदय !
हाम्रो शिक्षा र संस्कृति सनातन धर्म परम्परा हिन्दु दर्शनमा आधारित छ । हुन त सबै धर्मको सार भनेको मानवीय जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने हो । तर हाम्रो देश अत्यधिक हिन्दु धर्म दर्शन मान्ने मानिसको बसोबास बाहुल्य छ । यो सनातन दर्शनमा आधारित छ । हिन्दु शास्त्रले रोग भोक, शोक, पीडा, पाप, हीनता, दासता, अज्ञानता, द्वेष, पीडा कुरुती, कुसंस्कार, अन्याय, अत्याचार, अपहेलना, अभाव, दु:ख अवगुण, व्याधी, काष्टबाट मुक्त पाउनु पनि शिक्षा हो । स्थानीय कला, संस्कृति, रहनसहन, देशको भूगोल, इतिहास भू–बनावट, हावापानी, सन्तुलित आहारबिहार, प्रजनन, शिशुको स्याहार, विवाह, व्रतबन्ध, उज्यालो जीवनसम्बन्धी चेतना पनि शिक्षा हो ।
कस्तो व्यक्ति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा राज्यको दूरदृष्टिले निर्माण गर्ने कुरा हो । त्यसका लागि उचित शिक्षानीति, भौतिक संरचना, बालमैत्री पाठशाला, शान्त कक्षाकोठा, कुशल विषयगत शिक्षक शिक्षिकाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । कक्षाकोठालाई सानो प्रयोगशालाका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । घोकन्ते र सैद्धान्तिक शिक्षण विधिभन्दा प्रयोगात्मक व्यावहारिक सिकाइले बालबालिका स्वावलम्बन आत्मनिर्भर स्वरोजगारी हुन्छन् । शैक्षिक भ्रमण, सिकाइ भ्रमण, इतिहास बुझ्न, सङ्ग्रहालय, जैविक विविधता र कृषिसम्बन्धी बुझ्न खेतबारी चिडियाघर आदिको बालबालिकालाई लिएर दीक्षित गरिनुपर्छ । शिक्षा जागिर खानकै लागि हो भन्ने बुझाइ सोह्रै आना सही होइन तर व्यावसायिक बनाइनुपर्छ । अनुशासित, नैतिकवान्, स्वावलम्बी देशभक्त र वैज्ञानिक ज्ञान भएको नागरिक उत्पादन हुने शिक्षा हुनुपर्छ ।
देशको माटो सुहाउँदो र राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति समर्पित नागरिक उत्पादन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । अहिले व्यावहारिक ज्ञानका साथै युग सुहाउँदो प्राविधि शिक्षाको खाँचो छ । पढ्नेलाई पढ्न नदिने, लेख्नेलाई लेख्न नदिने, सधैँ अधिकारका लागि तयार पार्ने राजनीतिक पार्टीका नर्सरी बेर्ना बनाइनु अत्यन्तै खेदपूर्ण छ । आफ्नो मातृभाषा, राष्ट्र भाषा, राष्ट्रिय भाषा मासेर दुई चार शब्द टुटेफुटेको अङ्ग्रेजी शब्द घुसाएर मुख बाङ्गो पारेर बोल्नुलाई धेरै पढेलेखेका भन्ने मनोभावना अझै छ । भाषा प्रयोग गरेर ज्ञान हासिल गर्नु नै वास्तविक शिक्षा हो ।
नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाबीच ठूलो होडबाजी चलेको छ । राज्यको नीतिअन्तर्गत बसेर बालबालिकालाई कर्मठ नागरिक उत्पादन गर्छ भने त्यो योगदान हो । निजीले सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पारे । शैक्षिक माफियाले गर्दा शिक्षमा चरम भेदभाव भइरहेको देखिन्छ । राज्यको स्पष्ट नीति देखिँदैन । झारा टार्ने र कर्तव्यविमुख भएको छ ।
छोराछोरी पढेर स्वालम्बी नागरिक बन्लान् भन्ने अभिभावकले अपेक्षा राखेका हुन्छन् । निजी शिक्षण संस्थाहरूले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा टुटाएर आफूतिर आकर्षण गर्नु उनीहरुको व्यावसायिक धर्म हो । तर शिक्षाको नाममा लुट मच्चाएको जनगुनासो सुनिन्छ । यसमा पनि राज्यको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । बिचौलिया र शैक्षिक माफियाको चङ्गुलमा राज्यका तालुकदार संस्थाका व्यक्ति प्रलोभनमा परेको कुरा छरपस्ट छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले नै ठूल्ठूला निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज खोलेका छन् । तिनीहरुलाई अनुमतिपत्र दिने र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । तिनीहरुलाई नियमन गर्ने राज्यको नीतिमा निर्भर गर्छ । शुल्क कति लिने भन्ने विषय राज्यको नीतिमा भरपर्छ ।
व्यावसायिक शिक्षाका नाममा लगाएको राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुनु दु:खद पक्ष हो । शिक्षाले मानिसमा चेतना र आत्मनिर्भर बनाउने काम गर्छ । किताबी किरा मात्र भएर पनि हुँदैन । व्यावहारिक ज्ञान सूचना र प्रविधिमा जोड्ने कसी सेतु जीवन पद्धतिको महत्त्वपूर्ण सिकाइ शिक्षा सिद्ध हुनुपर्छ । राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिएको छ । सर्वप्रथम स्रोत पहिला दक्ष बनाइनुपर्छ । शिक्षाले हरेक मानिसको जीवनशैली, रहनसहन पारिवारिक सामाजिक दायित्व बोध जीवन उपयोगी गर्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षा पारिवारिक सन्तुलन, दाम्पत्य सम्बन्ध, घरपरिवार तथा नागरिकको हेरचाह गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
राज्यले पनि आफ्ना नागरिकको आर्थिक–सामाजिक र शैक्षिक जनशक्तिको सही तथ्याङ्क राख्न सक्नुपर्छ । दक्षता क्षमताका आधारमा शिक्षित जनशक्ति परिचालन व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । देश राजनैतिक नाराले मात्रै बन्दैन । अधिकारले मात्र पनि पुग्दैन । पाएको अधिकार सत् बुद्धिले राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ । काम गर, काम गरेर खाने वातावरण सिर्जना गरी खान देऊ ! नागरिकलाई आयआर्जनमा जोड आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । राजनीतिक खिचातानी छोडेर देश निर्माण कार्यमा समर्पित होऔँ । देश सबैको साझा घर हो । यहाँ बस्ने सबै नागरिक, जीवजन्तु, प्राणी, हावापानी, माटो समष्टिमा राष्ट्र हो ।
नैतिक शिक्षाबिना विनाश अवश्यम्भावी छ । केही गर्न सकिएन भने राजनीति छँदैछ भन्ने होइन । राजनीतिलाई यति घृणा नगरौँ । शैक्षिक प्रमाणपत्र सिरानी सन्दूकमा हालेर छोराछोरी बरालिएको देख्दा कुन चाहिँ मातापिताको मन चसक्क हुँदैन र । विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, भएका पार्टीको झोला बोकेर समर्थ र विरोधमा सहभागी हुन सदरमुकाम र राजधानीतिर लागेका पाइन्छन् । विद्यार्थी फ्रिफाएर पब्जी खेल्दै छन् । कसैलाई मतलब छैन । ती गुरुबा गुरुआमाले कस्तो शिक्षा देलान् ? अनि शिक्षामा सरकारी लगानी बालुवामा पनि भएन । ती शिक्षक शिक्षिकाको दोष होइन, राज्य राजनीतिक नेतृत्व नीतिनिर्माताको दोष हो । टिकटक बनाउने बालबालिकाको दोष होइन दोषी प्रचलित शिक्षा नीति नैतिक शिक्षा पाठ्यसामग्रीको हो ।
बालबालिका नर्सरी हुन् । नर्सरीमा केको बेर्ना रोप्ने, फुल्ने फलाउने हाइब्रेड, लोकल या अर्गानिक आदि कस्तो बनाउने भन्ने मार्गनिर्देशन गर्नेकाम शिक्षा नीतिले गर्छ । त्यसले यतातर्फ सोच्ने हो । माटो अर्थात खेतलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन ।
नि:शुल्क शिक्षा स्वास्थ्य नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भन्ने अनि स्वयं सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरु सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्नेतिर लाग्नाले यस्तो भएको हो । लगानी मात्र होइन त्यसबाट प्रतिफल कुन गुणस्तरको उत्पादन भयो भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । खेतबारीमा मकै छरेर उत्पादन हुँदैन, समयमा सिँचाइ, गोडमेल मल, रेखदेख, उन्नत बीउ, किसानको समर्पण, स्थानीय जलवायु र सिजनमा भर पर्छ । त्यसपछि पो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।
विद्यालय भवन अस्पताल खोलेर पुग्दैन । पढाउने दक्ष जनशक्ति, पढ्ने बालबालिका, विश्वासिलो शान्त रमणीय बालमैत्री सिक्ने र सिकाउने वातावरण हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालय पढ्ने गरिब र विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीले मात्रै हो भन्ने सोचाइ गलत छ । हुन त स्वयं सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक आफूले आफ्ना छोराछोरी निजि बोर्डिङमा पढाउने, बोर्डिङ खोल्ने गर्दा आम मानिसले कसरी बुझ्ने ? त्यही शिक्षक कक्षामा पनि पढाउने पछि त्यसैसँग अतिरिक्त कक्षा अर्थात ट्युसन पढ्नुपर्ने यो कस्तो अनौठो हो ? अस्पताल भनेको भौतिक संरक्षण मात्रै होइन । विशेषज्ञ आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री औषधि दक्ष अनुभवी डाक्टर मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नर्स जस्ता स्वास्थ्यकर्मीको सबभन्दा बढी खाँचो हुन्छ । डाक्टर सरकारी हुने तलबभत्ता जनताले तिरेको रगतपसिनाबाट खाने, सरकारी हस्पिटलमा जनशक्ति भए स्वास्थ्य साधनस्रोत नहुने, साधन भए डाक्टर नहुने, अनि तिनै डाक्टर निजी क्लिनिकमा गएर गुणस्तरीय उपचार दिने गर्छन् । यसरी संविधानको नै खिल्ली उडाएको देशमा कुन समाजवाद ल्याउन खोजेको होला ?
पाँच हजार वृद्धभत्ता बनाएर भोट पाउन सकिन्छ । तिनै जनताको तिरेको करबाट असुल गर्ने होइन र ? स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई काम नगर, सबै रेखदेख सरकार गर्छ पनि भन्न सक्छ तर स्रोत हुनुपर्छ । जनहित, सुशासन र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्छ । रोजगारीको सिर्जना गर्ने नागरिकको उत्पादन गर्नुपर्छ । तर आआफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्ने युवाहरूलाई सधैँ दलका झण्डा बोकाएर मुर्दावाद जिन्दावाद गरेर जीन्दगीभर गुजारा गर्ने हो भन्ने ठीकै छ । प्राकृतिक सम्पदाले धनी मुलुकमा सधैँ अभाव अराजकता र राजनीतिक खिचातानीले हत्याहिंसा, बलात्कार, कुशासन र दण्डहीनता बढिरहनेछ ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्यो, कुन देशबाट कति लगानी ?
युवराज सलमानमाथि अमेरिकाले औंला उठायो, साउदीले दियो यस्तो जवाफ
सुर्खेतमा स्कारपियोको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, मृतकको पहिचान हुन सकेन
आफ्नै ५ बर्षिया छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ
कांग्रेसले नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खनु सत्ताको नेतृत्वका लागि ‘च्याँखे’
आजबाट राजधानी हेटौंडा, नाम वागमती
हेटौंडाको टिसिएन रोडका दुई जनामा कोरोना
भोलिबाट घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने, सबै सवारी साधन बन्द
अजिता भुजेल हत्यामा सम्लग्न पक्राउ
हेटौंडामा भएको र्‍यापिड टेष्टमा ४ जनाको पोजेटिभ
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी, तानातानमा सांसद
अख्तियारले आफ्नै प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने
नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा
बर्डफ्लुको उच्च जोखिम, भारतबाट अवैध आयात जारी
सासा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
वाग्मती प्रदेश, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय
कम्पनी दर्ता नम्बर२१९५३५/०७६/०७७
कार्यालय: हेटौडा-०४, भैरवरोड
सम्पर्क नं.: ०५७-५२०५३६
© २०१९-२०२१ bylinenepal.com. सर्वाधिकार सुरक्षित